Non-Stick 3D ဆီလီကွန်ဂျယ်လီ၊ သကြားလုံးနှင့်ချောကလက်မှိုများကို - အခမဲ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အခွန်အကောက်ကင်းကင်း ၀ ယ်ယူပါ WoopShop®
Non-Stick 3D ဆီလီကွန်ဂျယ်လီ၊ သကြားလုံးနှင့်ချောကလက်မှို
$7.99 ပုံမှန်စျေးနှုန်း $14.99
အရောင် ချောကလက်5ချောကလက်6ချောကလက်7ချောကလက် 1 ချောကလက်2ချောကလက် 28 ချောကလက် 8 ချောကလက်9ချောကလက် 10 ချောကလက် 11 ချောကလက် 12 ချောကလက် 14 ချောကလက် 15 ချောကလက် 16 ချောကလက် 19 ချောကလက် 20 ချောကလက် 22 ချောကလက် 23 ချောကလက် 24 ချောကလက် 25 ချောကလက် 26 ချောကလက် 27 ချောကလက် 38 ဆီလီကွန်ကိတ်မုန့် bruch ချောကလက် 34 ချောကလက် 48 ချောကလက် 41 ချောကလက်3ချောကလက် 17
ချောကလက်5ချောကလက်6ချောကလက်7ချောကလက် 1 ချောကလက်2ချောကလက် 28 ချောကလက် 8 ချောကလက်9ချောကလက် 10 ချောကလက် 11 ချောကလက် 12 ချောကလက် 14 ချောကလက် 15 ချောကလက် 16 ချောကလက် 19 ချောကလက် 20 ချောကလက် 22 ချောကလက် 23 ချောကလက် 24 ချောကလက် 25 ချောကလက် 26 ချောကလက် 27 ချောကလက် 38 ဆီလီကွန်ကိတ်မုန့် bruch ချောကလက် 34 ချောကလက် 48 ချောကလက် 41 ချောကလက်3ချောကလက် 17
Non-Stick 3D ဆီလီကွန်ဂျယ်လီ၊ သကြားလုံးနှင့်ချောကလက်မှို - ချောကလက် ၅ backordered နှင့်အဖြစ်မကြာမီကြောင့်ပြန်စတော့ရှယ်ယာဖြစ်သကဲ့သို့တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။
အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် - CE / EU, FDA, LFGB, SGS, CIQ
Feature: Eco-Friendly၊ BPA အခမဲ့၊ သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်၊ မကပ်သော၊ အပူခံ၊ လုံခြုံသောမိုက်ကရိုဝေ့ဗ်
ပစ္စည်း - silicone-100% အစစ်အမှန်သန့်စင်သော silicone ကိတ်မုန့်များ
အပူချိန်: +230 -60
ပစ္စည်းအမျိုးအစား: ကိတ်မုန့်ဖုတ်ခြင်းအတွက် silicone မှို
ပါဝင်သည်: 1 * ကိတ်မုန့်
52 ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းအပေါ် အခြေခံ.
Пришлобыстро။ မွှေးပျော့သောсиликонмягко, естьнемногозапаха, некритично။ Продавцуотдельноеспасибо !!!
ပုံထဲမှာလိုပဲ။ မှိုအရည်အသွေးကောင်းမွန်သော်လည်းပလတ်စတစ် / silicone များစွာရှိသည်။ ဖော်ပြချက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်းသူတို့ဟာအစားအစာအဆင့်ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်
ဖော်ပြချက်နှင့်အညီ, အစာရှောင်ခြင်းရေကြောင်း, အကြံပြုပါသည်
silicone မှိုအလွန် fajnej အရည်အသွေးကို။ အလင်းနှင့်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်။ ကလေး zachwycone ။ Napewno ပုံ Wiecej
ရရှိသောအော်ဒါမှာကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ပို့ဆောင်မှုသည်အလွန်မြန်သည်။ ဖြီးသည်တစ်ချိန်ကပါးလွှာ။ သေးငယ်သည်၊ အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးတာဝန်ရှိသည်။